Waxaan ka G-Technology External Hard Drive soo kaban karto, Data?
Hab-G-Technology External Hard Drive Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Waxaan leeyahay G-Technology 500G G-Drive Mini adag dibadda drive ah, taas oo ka kooban dad badan oo ka mid ah sawirada aan qiimo iyo videos ku yaal. Maanta waxaan si taxaddar la'aan la tirtiro qaar iyaga ka mid ah oo aanan lahayn wax raad raac ah. Hadda waxaan u baahan tahay oo keliya in ay dib uga soo drive ka heli files aan la tirtiro. Qof i caawin kartaa fadlan?
In kastoo G-Technology drive dibadda adag tahay si degdeg ah oo ammaan ah, waa lama huraan in ilaa khasaaraha xogta. Faylal ku yaal lagu lumin karaa sababtoo ah ula kac ah ama shil tirtirka, howlgal aan habboonayn, formatting, virus weerar iyo xitaa baadi nidaamka. Si kastaba, faylasha tirtiray ayaa weli aad G-Technology drive dibadda adag. Waxaa kaliya lagu calaamadeeyay xogta sida geli karin nidaamka. Marka xogta cusub ku wadid aad u adag iyaga overwrites, way doonaa in si joogto ah markaas laga badiyay. Sidaas, waxaa jira fursad weyn oo soo kabsaday files ka G-Technology drive adag dibadda ilaa iyo inta aadan isticmaalin drive dambe oo markiiba qaadaan tallaabo ku haboon.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa G-Technology xogta drive qalab yaab dibadda adag soo kabashada kaa caawinaya in aad dib u hanato xogta aad lumay fudayd. Waa awoodaan inay ka bogsadaan tirtiray, laga badiyay, formatted iyo faylasha laga aad G-Technology si fudud. Waxaa si buuxda la jaan qaada ah noocyada G-Technology drive dibadda adag. By u isticmaalaya waxaad heli doontaa dib u faylasha sida sawiro, videos, files audio, waraaqaha iyo in ka badan.
Halkan waxaan ku qaadan Wondershare Data Recovery for Windows sida tusaale. Users Mac fadlan version Mac ah si loo farsameeyo soo kabashada la hawlaha la mid ah.
Tallaabada 1 hab kabashada Select inuu ku soo bilowdo G-Technology kabashada xogta drive adag dibadda
Ka dib markii socda Wondershare Data Recovery for Windows, waxaa lagu siin doonaa 3 hababka soo kabashada.
Si aad u soo kabsado tirtiray ama formatted files ka G-Technology drive dibadda u adag, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" sida isku day ah oo hore.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad G-Technology drive dibadda adag oo la aqoonsan karo sida drive adag on your computer.
Tallaabada 2 baarista G-Technology drive dibadda adag tahay in la raadiyo files lumay
Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan drive ee G-Technology drive dibadda adag oo guji "Start" in iskaan xogta laga badiyay.
Haddii files yihiin formatted ka G-Technology drive dibadda adag, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka G-Technology drive dibadda adag
Dhammaan files helay on your G-Technology drive dibadda adag lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" & "Jidka" qaybood uu furmo suuqa.
Waxaad u baahan tahay oo kaliya si ay u xusaan faylasha aad rabto in aad dib u soo ceshano ka G-Technology adag la wado oo guji "Ladnaansho" button inay dib u badbaadin your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo xogta soo kabsaday isla markiiba ka dib dib si aad G-Technology drive dibadda adag.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Sony Xperia Z
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Card SmartMedia
> Resource > Ladnaansho > Siduu u G-Technology External Hard Drive Data Recovery